कांग्रेसका युवा नेताले भने– ७० कटेका नेताले विश्राम लिनुपर्छ – www.agnijwala.com
बूढा डाक्टरहरूले आईसीयूमा पुगेको पार्टीलाई शल्यक्रिया गरेर बचाउन सक्दैनन् : भण्डारी
अब पनि पहिलो पुस्ताका नेतालाई भारी बोकाउनु उहाँहरूप्रति पनि अन्याय हो : थापा
काठमाडौँ — कांग्रेसका युवा नेताले पार्टीको भविष्यका लागि पहिलो पुस्तालाई विश्राम लिन आग्रह गरेका छन् । नेतृत्वको रणनीतिक असफलता र पुरानो कार्यशैलीबाट अब पार्टी नचल्ने भन्दै उनीहरूले ७० वर्ष कटेका नेतालाई पार्टीबाट विश्राम लिएर अभिभावकको भूमिकामा बस्न आग्रह गरेका हुन् ।
निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै भण्डारीको संयोजनमा युवाको समूहले निर्वाचन समीक्षा र नेतृत्व हस्तान्तरण मुद्दा उठाउन विशेष महाधिवेशन माग गर्दै आएको छ । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशन होइन, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मात्रै बोलाउने बताएका छन् । ‘नेपालीको एभरेज आयु ७० वर्ष छ । तर हाम्रा नेताको उमेर ७२/७४ पुगिसक्यो । आईसीयूमा पुगेको कांग्रेसलाई अब यी बूढा डाक्टरले शल्यक्रिया गर्न सक्दैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘समयअनुसार चल्न नसक्ने यी नेतालाई अब बिदा गर्नुपर्छ ।
पार्टीले लज्जास्पद पराजय भोग्दा पनि नेतृत्वमा होस नखुलेको भण्डारीले बताए । शुक्रबार नै समानुपातिक सदस्य छनोट गर्ने क्रममा पार्टी विधान र पद्धति मिचेर नेतृत्वले छोरीलाई दाइजो दिएजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘जसले आफ्नो इतिहास जोगाउन सकेन, त्यस्ता नेताबाट हामीले के आशा गर्ने ?’ भण्डारीले थपे, ‘समानुपातिक पद्धति दाइजो हो कि न्याय गर्नका लागि ल्याइएको हो ?
युवा नेता गगन थापाले कांग्रेसको नवजागरणका लागि पहिलो पुस्ताले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘यो नेतृत्वप्रति अनुदार होइन । पार्टीको पहिलो पुस्तालाई योभन्दा बढी भारी बोकाउनु उहाँहरूप्रति पनि अन्याय हो,’ थापाले भने, ‘अब विश्राम लिनुहोस् र अभिभावकको भूमिकामा बस्नुहोस् ।’ यसो भन्नुको अर्थ आफैंले पार्टी नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दृष्टिकोण आफ्नो नरहेको थापाले प्रस्ट पारे । ‘५ वर्षपछि फेरि चुनाव आउँछ, त्यतिबेला कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बन्न थप १७ लाख मतदाता ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई पदाधिकारी र नेतृत्व केही चाहिएको छैन । क्रियाशील सदस्यता भएरै काम गर्न तयार छौं । तर तपाईंहरू (पार्टी नेतृत्वमा रहेको पहिलो पुस्ता) अभिभावक भएर बस्ने हो कि होइन ?
उनीहरूले निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुमा सरकारले गरेको नकारात्मक काम बढी जिम्मेवार रहेको बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्धको महाअभियोग, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरण, विवादास्पद व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने निर्णयलगायतका सरकारका गलत कामकारबाहीले मतदाता भडकिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विषयमा पार्टीले केही नबोलेको र राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रस्ट नभएकै कारण पार्टी कमजोर हुन पुगेको उनीहरूले बताए ।
कांग्रेसबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धेरै भनिदिनुभयो । तर हामीले होइन भनेर भनेनौं,’ थापाले भने, ‘ओलीले के भने भन्दा पनि हामीले के भन्यौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नाबारे भन्नै सकेन ।
रायमाझीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे कांग्रेस केन्द्रीय समितिले विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्नु दुर्भाग्य रहेको बताए । उनले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू महेन्द्रका अवशेष रहेका बताउँदै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न नसक्दा कांग्रेसले यस्तो हविगत व्यहोरेको बताए । कांग्रेसको सुधारका लागि युवाले चालेको अभियानबाट आत्तिएर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बचाउमा केही नेतालाई अघि बढाइएको भन्दै उनले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । ‘विशेष अधिवेशन बोलाए पनि तपाईंलाई (देउवा) हटाउने कोही हुने छैनन्, कांग्रेसको सुधारको माग गर्दा देउवा कहाँनेर कमजोर हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले त कांग्रेसलाई सुधारकै बाटोमा लैजान्छ ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले निर्वाचनको समीक्षाका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि महाधिवेशनको बैठकसम्म जानुपर्दछ, महाधिवेशन बोलाउनासाथ नेतृत्व छाड्नुपर्छ कि भन्ने भय नेतृत्वले लिनुभएन,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई लोकतान्त्रिक भन्ने तर पद्धति र प्रक्रिया हेर्‍यो भने जनवादी केन्द्रीयताको विकास हुँदै गएको छ ।
पौडेलले सरकारको गलत कामकारबाही र गुटबन्दीका आधारमा टिकट वितरण गर्दा नै पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोरेको बताए । ‘जित्नेलाई नभएर जितेपछि आफूलाई सहयोग गर्छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार बनाइयो,’ पौडेलले भने, ‘नेपालको इतिहासमै कांग्रेसले अहिलेको जस्तो लज्जास्पद हार कहिल्यै व्यहोरेको थिएन ।
केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले पार्टी पराजयको कारणबारे निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । पार्टीभित्र नेताले आ–आफ्नो सिन्डिकेट कायम गरेको बताउँदै त्यसलाई नभत्काउँदासम्म कांग्रेसमा सुधार नहुने बताए । ‘सिन्डिकेटमा पार्टी चलाउने प्रवृत्तिलाई हामीले अन्त्य गर्न सकेनौं भने अर्कोपटक पनि कांग्रेसले यस्तै गरी हार्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक अव्यवस्था सुधार गर्न नेतृत्वमा युवाले जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।russiangadgetотзывыwinperstchpкупить босоножки на танкетке недорогоцены на путевки в доминикану